बाँझोपन बढ्नुको प्रमूख ९ कारण – Lokpati.com
चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रचण्ड मृत्यु नेकपा केपी शर्मा ओली अमेरिका अपराध पक्राउ राशिफल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली काँग्रेस नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री
बाँझोपन बढ्नुको प्रमूख ९ कारण
By लाेकपाटी न्यूज	 Last updated Jan 12, 2020
काठमाडौं। आधुनिक जीवनशैलीलाई अपनाउने चक्करमा यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले बाँझोपनको समस्या ल्याउँछ। खानपान, शिफ्ट अनुसारको जागिर तथा रहनसहनमा आएको परिवर्तनका कारण जहाँ एकातिर हाम्रो जीवनको स्तर पहिलाको तुलनामा निकै ठूलो भएको छ, अर्कोतिर आधुनिकीकरणको परिणामस्वरुप पनि थुप्रै प्रकारका स्वास्थ समस्या बढेको छ।
अहिले बढ्दो उमेरसँगै लाग्ने रोगहरु युवा अवस्थामै लाग्न थालेका छन्। ती मध्ये एउटा सामुहिक समस्याहरु युवाहरुमा बढ्दो बाँझोपन। वास्तवमा युवाहरुमा बाँझोपनको समस्या आधुनिक जीवनशैलीमा गरिने केही आम गल्तिहरुको कारणले बढिरहेको छ।
खानपिनको गलत बानीः बाँझोपनको लागि सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार भनेकै खानपिनको गलत बानीलाई मान्न सकिन्छ। कुबेलाको खाना खुवाइ, जंक फूड, फास्ट फूड खाने बानीकै कारण युवा अवस्थामै बाझोपनको समस्या बढिरहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
फास्ट फूड तथा जंक फूड जस्ता खाद्यपदार्थमा हुने पेस्टीसाइडले शरीरमा हार्मोनको सन्तुलनलाई बिगार्छ, जसका कारण बाँझोपनको समस्या पैदा हुन्छ। त्यसैले आफ्नो खानपिनमा परिवर्तन गर्दै पौष्टिक आहारको सेवन गर्नु पर्छ। हरिया सागपात, ड्राइफुड, गेडागुडी, दाल जस्ता खाद्य पदार्थको सेवन धेरै भन्दा धेरै गर्नु पर्छ।
तनावः आधुनिक जीवनशैलीमा करिव-करिव हरेक व्यक्ति तनावबाट ग्रस्त छन्। कामको दवाव, प्रतिस्पर्धाको भावना, किस्ताको बोझ, जीवनशैलीलाई मेन्टेन गर्नका लागि हुने आर्थिक बोझ आदि त्यस्ता समस्याहरु हुन्, जसलाई हामी स्वयम्ले आफ्नै लागि तयार पारेका हौं।
यी सबैका कारण अधिकांश युवाहरु तनावमा रहन थालेका छन्। यही कारण उनीहरु बाँझोपनको शिकार हुन थालेका छन्। यसबाट बच्नका लागि त्यस्ता कामहरु गर्नु पर्छ, जसबाट तपाईं तनावग्रस्त हुने सम्भावना कम हुन्छ। तनाव भएको बेला परिवारका सदस्य तथा साथीभाइहरुको सहयोग लिनु पर्छ।
उमेर छिप्पिएपछिको विवाहः आज प्रगति र सफलताको चाहनामा महिला तथा पुरुषहरु कम उमेरमा विवाह गर्नै चाहँदैनन्। विवाहपछि पनि आर्थिक सुरक्षालाई कायम राख्दा-राख्दै उनीहरुले सन्तान जन्माउने बारेमा सोच्नै भ्याउँदैनन् अथवा त्यसबारेमा सोच्न धेरै समय लगाउँछन्। महिलाहरु समेत अचेल आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् र उनीहरु कम उमेरमा बच्चा जन्माउन चाहँदैनन्।
चिकित्सकहरुका अनुसार उमेर छिप्पिएपछि विवाह गर्नाले महिलाहरुको डिम्बको गुणस्तरमा प्रभाव पर्छ। यही कारणले उनीहरुमा बाँझोपनको सम्भावना समेत बढेर जान्छ। यसबाहेक गलत जीवनशैलीका कारण पनि अचेल युवाहरुमा उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरु समेत देखा पर्न थालेका छन्, जसका कारण बाँझोपन हुने समस्या बढ्छ।
व्यायाम नगर्नुः कामको दवावका कारण व्यायामका लागि समय निकाल्न युवाहरुका लागि निकै ठूलो समस्या बन्दै गैरहेको छ। कल सेन्टर तथा सञ्चारमाध्यमको जागिरमा त समयको बाध्यता नहुनाले कामको दवाव र प्रतिस्पर्धा अझ बढ्छ। युवाहरुका लागि सन्तान जन्माउनु भन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रगति तथा भौतिक सुखसुविधाका लागि पैसा महत्वपूर्ण हुन थालेको छ।
यही कारण जीवनको अधिकांश समय अफिसको काममै बितिरहेको हुन्छ। अफिसमा धेरै समयसम्म काम गरेपछि घर आउँदा श्रीमान्-श्रीमती नै थकित भैसकेका हुन्छन्। यस्तो बेला दुबैलाई शारीरिक सम्पर्क राख्ने चाहना समेत हुँदैन। यदि कामसंग-संगै शारीरिक व्यायामलाई समेत निरन्तरता दिने हो भने बाँझोपनबाट बच्न सकिन्छ।
निद्रा पुरा नहुनुः निद्रा पुरा नहुने कारण पनि युवाहरुमा बाँझोपनको समस्या बढिरहेको छ। कामको बोझ र राती ढिलोसम्म पार्टी गर्ने कारणले युवा-युवतीहरु पर्याप्त निद्रा पुर्‍याउन पाउँदैनन्, जसका कारण हार्मोनमा असन्तुलन हुन्छ र बाँझोपनको समस्या बढ्छ। थुप्रै वटा अनुसन्धानहरुले पनि के कुरा पत्ता लगाएको छ भने निद्रा पुरा नहुने कारण हार्मोनको सन्तुलन बिग्रन्छ र बाँझोपनको समस्या देखिन्छ। त्यसैले नियमित रुपमाले कम्तिमा सातदेखि ९ घण्टा सुत्नु अनिवार्य छ।
तौल बढ्नुः खानपानको गलत बानी-व्यहोरा र व्यस्त दिनचर्याका कारण व्यायामका लागि समय निकाल्न पाउँदैनौं। जसको कारणले हामी मोटाउन थाल्छौं। चिकित्सकहरुका अनुसार मोटोपना पनि बाँझोपनको एउटा ठूलो कारण हो। अधिक तौलले महिला तथा पुरुष दुबैको प्रजनन शक्तिलाई प्रभावित बनाउँछ।
यसबाहेक जो महिलाहरुको तौल सामान्य भन्दा कम छ, उनीहरुमा पनि यो समस्या देखिन्छ। त्यसैले यदि तपाईंको तौल धेरै छ भने त्यसलाई बढाउने कोशिस गर्नु पर्छ भने जसको तौल कम छ, उनीहरुले बढाउने कोशिस गर्नु पर्छ।
चुरोट र रक्सीः अचेलका युवाहरुमा रक्सी, चुरोट, कोकिन आदिको प्रयोग निकै सामान्य झैं भैसकेको छ। यी सबै नशालु पदार्थहरुको प्रयोगका कारणले युवक तथा युवती दुबैमा बाँझोपनको समस्या देखिन थाल्छ। यी पदार्थको अत्यधिक सेवनका कारण पुरुषको विर्य तथा महिलाको डिम्बको गुणस्तरमै हृास आउँछ।
एकातिर जहाँ धुम्रपान गर्नाले बिर्यको उत्पादनमै कमि आउँछ भने अर्कोतिर रक्सीको सेवनले टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उत्पादनमा पनि कमि आउँछ। यसबाहेक औषधीहरु खासगरी एन्टिबायोटिकको अत्यधिक प्रयोगले पनि बाँझोपनको समस्या बढ्न सक्छ।
स्वास्थ्य समस्याहरुः हाइपरटेन्सन तथा उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरु, जसलाई कुनै बेला बृद्ध-वृद्धालाई लाग्ने रोग भनिन्थ्यो, आज युवापुस्तामा समेत सामान्य हुन थालेको छ। यसको प्रभावले युवापुस्ताको यौन जीवनलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सानै उमेरदेखि कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा बस्नु सामान्य भैसकेको छ। यीनै बानीहरु समेत बाँझोपनको कारण बनिरहेका छन्।
बाँझोपनको उपचारः असिस्टेड रि–प्रोडक्टिभ प्रविध अर्थात आईविएफको माध्यमबाट तपाईंको आमा बन्ने सपना पुरा हुनसक्छ। तर, त्यस्तो स्थितमा डोनरको सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ। त्यसलै, चिकित्सकहरु के सल्लाह दिन्छन् भने यदि तपाईंले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु भयो भने बाँझोपनको समस्याबाट बच्नु हुनेछ।
सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
एमसीसी सम्झौता महाकाली सन्धिभन्दा ठूलाे राष्ट्रघात हुनेछ : देव गुरुङ
यस कारण नर्गुहोस् बच्चाको ओठमा चुम्बन
‘सुतेकाे मान्छे जुरुक्क उठ्दा हर्टअट्याक हुन् सक्छ’
छालाको क्यान्सर, कसरी बच्ने ?
धुलोमुक्त सडक बनाउने अभियानमा प्रचण्ड
धनुषाधाममा एन आई सी एशिया बैंकको शाखा
प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एक अर्काको परिपुरक: काँग्रेस
वायुसेवा निगमले माग्यो डेढ सय बढी कर्मचारी (सूचनासहित)
बम राखेको आरोपमा सेनाका पूर्वहवल्दार पक्राउ
एनआईसी एशिया बैंकको धनुषामा नयाँ शाखा
महराको सांसद पद निलम्वन फुकुवा